दशैं बिदामा विदेश घुम्ने हो ? हेर्नुहोस जानैपर्ने ३ उत्कृष्ट विदेशी गन्तव्यहरु - Daraz Life
दशैं बिदामा विदेश घुम्ने हो ? हेर्नुहोस जानैपर्ने ३ उत्कृष्ट विदेशी गन्तव्यहरु01726
Umanga Khatiwada September 2, 2019 4:34 PM April 28, 2020
दशैं नजिकिएको छ । प्राय जसो दशैंमा नेपालीहरु घर–परिवारसँग भेटघाट गर्दछन् । दशैं परिवारका साथ रमाउने, खाने र घुम्ने समय पनि हो ।
त्यसैले पछिल्लो समय नेपालीहरु चाडपर्वको अवसर पारेर विदेश भम्रणमा जाने प्रचलन पनि बढिरहेको छ । विशेषगरी भ्रमणका लागि नेपालीहरू अहिले इन्डोनेसिया, मलेसिया, थाइल्यान्ड, यूएई, सिंगापुर, युरोप तथा अमेरिकासम्म जाने गरेका छन् ।
यी ठाउँमा घुम्नु भएको छ ? अमेरिका तथा युरोपको प्याकेज भने केही लामो हुने गर्दछन् । अरु भने ४ रात ५ दिन हुने गर्दछन् जुन बन्न सक्छन् दशैं विदामा घुम्न जाने उत्कृष्ट गन्तव्यहरु । ति मद्धे पनि सबैभन्दा उत्क्रिस्ट र सस्तोमा घुम्न जाने गन्तव्यबारे आज तपाईंलाई जानकारी दिंदैछौं र यसरी लेखेका छौं ।
पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार अहिले नयाँ गन्तव्यका रूपमा उदय भएको स्थान हो इन्डोनेसियाको बाली । बाली जाने नेपालीहरुको संख्या वार्षिक २५ हजारभन्दा बढी रहेको छ । बालीमा रहेको हिन्दू मन्दिर तथा त्यहाँका विभिन्न दृश्यावलोकनका लागि नेपालीहरू बढी जाने गरेका छन् ।
YouTube/ Allan Su
ट्राभल एजेन्सीहरूले सहुलियत दरका भ्रमण प्याकेजहरु बनाएर नेपालीहरुलाई पर्यटकका रूपमा विदेश लैजाने गरेका छन् । तिमध्ये सम्सरा हलिडेज् ले बाली लगाएत अन्य गन्तव्यका लागि विशेष “अल इन्क्लुसिभ ४ रात/ ५ दिनका ” प्याकेजहरु तयार गरेको छ । यो प्याकेजको मूल्य रु. ७८,९९५ रहेको छ जुन अतिरिक्त रु.२५०० को छूट पाई रु. ७६,४९५ मा अनलाइन शपिङ साइट दराज बाट पनि किन्न सकिन्छ ।
अझै जानकारी का लागि उक्त लिंक मा क्लिक गर्नुहोस:
Bewitching Bali Tour Package (4N/5D) 29th September – 4th October 2019
पर्यटनको लागि निकै सुन्दर मानिएको भनिने दुबई घुम्नकै लागि धेरै नेपालीहरु जने गर्छन् । बिश्वको सबैभन्दा ठूलो मानव निर्मित टावर बुर्ज खालिफा पनि दुबई मै पर्छ । पर्यटकको रोजाईमा पर्ने मरभूमि सफारी, मिरकल गार्डेन, धौउ क्रुज, मेट्रो रेल, लगायतका घुम्ने स्थल दुबई मै भएको हुँदा पनि पर्यटकको रोजाईको क्षेत्र बन्ने गरेको छ दुबई ।
YouTube/ Hungry Passport
सम्सरा हलिडेज्ले दुबई को लागी विशेष “अल इन्क्लुसिभ ४ रात/ ५ दिनको” प्याकेज दशैं को लागि भनि तयार गरेको छ । यो प्याकेज को मूल्य रु. ७२,९९९ रहेको छ जुन अतिरिक्त ६% छूट पाई रु. ६८,४६२ मा अनलाइन शपिङ साइट दराज बाट पनि किन्न सकिन्छ ।
6th October – 11th October 2019
इजिप्ट ऐतिहासिक, आधुनिक र प्राकृतिक आकर्षण ले भरीएको छ । दशैंको छुट्टिको आनन्द लिन मिस्र एकदमै सहि गन्तव्य हो । गीजा को ग्रेट पिरामिड, र ग्रेट स्फींक्स संसारकै सबै भन्दा ऐतिहासिक स्मारकमा पर्दछन् । त्यति मात्र नभई इजिप्ट नाइल नदी, विश्व प्रसिद्ध मीनारहरु, रेड सी, सुन्दर समुद्री तटहरु, एतिहासीक शहरहरुले पनि सजिएको छ ।
YouTube/ The American Tourist
सम्सरा हलिडेज्ले इजिप्ट को लागी विशेष “अल इन्क्लुसिभ ४ रात/ ५ दिनको” प्याकेज तयार गरेको छ । यो प्याकेज को मूल्य रु. ९२,८४५ रहेको छ जुन अतिरिक्त ६% छूट पाई रु. ८९,५२७ मा अनलाइन शपिङ साइट दराज बाट पनि किन्न सकिन्छ ।
Egypt Tour Package (4N/5D)
एजेन्सीहरूका अनुसार दसैंको घटस्थापनादेखि नै तिहारसम्मलाई लक्ष्य गरी बनाइएका टुर प्याकेजहरु ल्गभग सबै ‘प्याक’ हुने गर्दछन् । स्रोत अनुसार सदसैंतिहार बिदामा मात्रै २० हजारभन्दा बढी नेपाली ट्राभल एजेन्सीले ल्याएका प्याकेजको प्रयोग गरी विदेश भ्रमणका लागी जाने गरेका छ छन् ।
beaches resorts locationscheap tour packagesfamily vacation packagesholiday packages
Previous ArticleSony MDR-XB55AP Extra Bass Earphones Long Long Long Time ReviewNext ArticleWhat I Love About Dashain – Hear it from Lex Limbu himself!